MYSQUAR - Connecting Myanmar
Careers // အလုပ်များ
Investors // ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
MyCHAT is the first social chat application developed exclusively for Myanmar. // MyChat ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံးလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ABOUT // သိရှိစေရန်
An app to rule it all! // တစ်ခုတည်းနဲ့ အရမ်းစွမ်းတဲ့ App
Chat, Feed, Stickers, everything you need
to enrich your social network. // သင့်ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကို ဒီ့ထက်ပိုကျယ်ပြန့်သွားစေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် Chat, Feed နဲ့စကစ်ကာတွေ။
MyCHAT Community // MyChat ဆုံစည်းရာရပ်ဝန်း
It’s young, full of energy, and filled with unlimited possibilites. // ငယ်ရွယ်တယ်၊ တက်ကြွတယ်၊ အလားအလာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်
Myanmar Stickers // မြန်မာစတစ်ကာများ
Illuminate your conversations & make chatting even more exhilarating by tapping into our ever-growing original sticker sets. // MyChat ကနေ အမြဲမပြတ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတဲ့ မူပိုင်စတစ်ကာ set တွေကို အသုံ ပြု ပြီး ချက်တင်ထိုင်တဲ့အခါ အားပါးတရ ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားပြောလိုက်ကြရအောင်။
Group Chat & Multiply the fun // ဆတိုးပျော်ရအောင် အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ချက်ကြမယ်
Stay connected at all times! Have your friends with you wherever you are, and never feel lonely again. // သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ပြည့် ချိတ်ဆက်နေလို့ရတယ်! ကိုယ်ဘယ်ပဲရောက်နေနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချက်နေနိုင်တော့ ဘယ်တော့မှ အထီးကျန်မနေတော့ဘူးပေါ့။
WHY USE MYCHAT? // MyChat ကို ဘာကြောင့်သုံးမှာလဲ?
It’s young, energetic, and teeming with possibilites. // ငယ်ရွယ်တယ်၊ တက်ကြွတယ်၊ အလားအလာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်
Chat for FREE // အခမဲ့ချက်နိုင်တယ်
Runs super fast on your device! // ဖုန်းထဲမှာ အရမ်းပေါ့ပါးတယ်
More 3G data saved // 3G data ကုန်ကျမှုသက်သာစေခြင်း
Smart contacts sync // အဆက်အသွယ်များအား ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းကူးပေးခြင်း
Download MYCHAT now // MyChat ကိုအခုပဲ ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုက်ပါ။
ADDRESS // လိပ်စာ
Vietnam Office: // ဗီယက်နမ်ရုံး
Floor 7th, Vimedimex Building. // အလွှာ 7, Vimedimex အဆောက်အဦး
246 Cong Quynh Street, Pham Ngu Lao Ward, District 01, HCMC. // အမှတ် 246, Cong Quynh လမ်း, Pham Ngu Lao ဆောင်, ခရိုင် 01, ဟိုချီမင်းမြို့
Myanmar Office: // မြန်မာရုံး
Unit 3, Level 7, Union Financial Centre (UFC), // အခန်း 3, အလွှာ 7, Union Financial Centre (UFC)
Corner of Mahabandoola Road & Thein Phyu Road & 45th Street Botataung Township, Yangon. // 45 လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
© 2016 SQUAR PTE LTD.